Rehefa nandinika tsara ny zava-misy ary ny vondrona parlemantera TIM eny Tsimbazaza sy ny birao politika dia nanapa-kevitra fa tsy depiote misalotra ny anaran’ny Tiako i Madagasikara intsony Atoa isany Guillaume Ravahimanana voafidy tao Miarinarivo sy Benjamin Andriamitantsoa voafidy teny Avaradrano. Tsy voahajan’izy ireo intsony ny fitsipika mifehy ny antoko raha araka ny vaovao voaray ary efa tena mivaona tanteraka amin’ny foto-kevitra ijoroan’ny Tiako i Madagasikara mihitsy izy mirahalahy ireto koa dia izay no anton’izao fanapahan-kevitra izao. Tsy nanolotra anarana praiminisitra ny TIM nefa izy isan’ireo depiote 16 lahy nandeha teny Iavoloha niaraka tamin’ny filohan’ny Antenimieram-pirenena Rakotomamonjy Jean Max nanolotra anarana kandida praiminisitra tamin’ny filohan’ny Repoblika. Fihetsika izay mifanohitra amin’ny lalampanorenena no nataon’izy ireo. Nibaribary ihany koa ny fitsipahana ny laka-nitana nataon’izy ireo tamin’ny fandaniana volavolan-dalàna momba ny fampihavanam-pirenena farany teo. Nanangan-tanana nandany io lalàna io niaraka tamin’ireo depioten’ny HVM antoko eo amin’ny fitondrana izy roalahy ireo, nefa ny toromariky ny antoko TIM dia mitsipaka ny fandaniana azy io noho ilay lalàna manavakavaka.Ny alakamisy alina teo aza nandritra ilay fifanatrehan’ny governemanta sy ny depiote teny Tsimbazaza dia tsy nanao afa-tsy ny nitoraka voninkazo sy nisolelaka ny fitondrana HVM ireo depiote roa ireto. Malaza moa ny resaka malety eny amin’ny antenimieram-pirenena eny ka maro noho izany no mihevitra fa mety voafidy vola izy mirahalahy ireto matoa namadika palitao sy nanadino tanteraka ny etika politika tahaka izao.
RTT sy Jean D